February 25, 2020 - MM Live News
February 25, 2020 February 26, 2020 MM Live News
အ ရမ်းေ ကာင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောကဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မိုးပြောပြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ယတာချေနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖတ်ကြည့်ပါ လ င်နှင့် မ ယားချစ်ကြင်ငြားစီးပွားတက်မည်သာ…. စီး ပွား တက် ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်ရင် စီးပွားမတက်တာလဲ။ရန်ြ ဖစ်ပြီ ဆို တာနဲ့ ဝစီဒုစရိုက် မနောဒုစရိုက်မှုတွေ ကျူးလွန်မိတော့တာကိုး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်တဲ့အချိန်က နက္ခတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။ နက္ခတ်ကောင်းရင် စီးပွားတက်မှာပဲ။ နက္ခတ်ကောင်းဖို့ ယတြာချေနေဖို့ မလိုဘူး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။လူ ဆို တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းချည်းပဲထင်နေတတ်ကြတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေပဲဆိုတော့ အကောင်းချည်းပဲဆိုတာတော့ဖြစ်မလာဘူး။ လင်မယားဆိုတာ ကောင်းတိုင်ပင် ဆိုးတိုင်ပင်ရှိရမယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် […]
ယောကျြားတဈယောကျကို အောငျမွငျအောငျပံ့ပိုးပေးနိုငျတဲ့ မိနျးမ “၁၀” မြိုး
February 25, 2020 MM Live News
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။ သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကပျော်ရွှင်ချင်ယောင် ဆောင်ပြဆောင်ပြ သင့်ရဲ့ဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေကို ဝေမျှပြီး ခံစားနားလည် ဖြေရှင်းပေးတတ်ပါတယ်။ […]
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါများစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း) သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ….. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ….. သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ…. (ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ)…. အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲကဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်…. ကိုယ်ပြောတဲ့စကား အောင်စေပါတယ်…. သွားတိုက်ပြီးလို့ ရေကို ထပ်ကိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပထမဆုံး – မိမိကိုယ်မိမိဆုတောင်းပါ…. ဤရေ အေးမြသလို အကျွနိုပ်လည်းအေးမြပါစေ)… မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ… အဲ့ဒါပြီးရင် သင်အချစ်ဆုံးသူကို […]
ဒီ 2020 နှဈ ထဲမှာ ဘဝတဈဆဈခြိုး ပွောငျးလဲမညျ့ နဖှေ့ားမြား
February 25, 2020 February 25, 2020 MM Live News
ဒီ 2020 နှစ် ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများ (1) ကြာသပတေး အရာရာ ထိပ်ဆုံးရောက် အောင်မြင်မယ့်နှစ် ဖြစ်လတ္တံ အချစ်ရေး ကိစ္စတွင် ကိုယ့်ထက်သာမယ့်သူ သို့ ကိုယ့်ထက်ကြီးမယ့်သူနှင့် ဖူးစာဆုံရလတ္တံ…. နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ကာ ကြင်ဖက်ရွေးလတ္တံ ငွေဝင်ကောင်းလတ္တံ ချေးထားငွေ များပြန်ရလတ္တံ…. မိခင်နှင့် ဝေးနေကြသူများ ပြန်ဆုံ ရလတ္တံ မိခင်၏ ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်နေကြသူများ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် မရှိဖြစ်လတ္တံ…. အထက်အရာရှိ ဆရာသမား ပူဇော်မစ ကူညီခြင်းကို ခံရ လတ္တံ အလုပ်အကိုင် တည်မြဲလတ္တံ…. အိမ်ထောင်ကျ ကံကောင်းသော နှစ်ဖြစ်လတ္တံ အိမ်ထောင်စီးပွားတက်လတ္တံ…. ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် မရှိဖြစ်လတ္တံ ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်၏။ (2) […]
ခုအခြိနျထိ ရောကျခဲ့သမြှနရောတှထေဲမှာ မတှဖေူ့းသေးတဲ့ အမှတျမထငျ တှလေို့ကျရသော တောဘုနျးကွီးကလေး
အယဉ်ကျေးဆုံး ရတနာမြေ (သို့မဟုတ်) ဓမ္မစကူးလ်မြို့ အင်းတော် တောဘုန်းကြီးကလေး မြို့ထဲကို ဝင်လိုက်တာနှင့် ပထမဆုံးတွေ့ရတာက မြေကြီးပေါ် ကျကျနနထိုင်ပြီး ရှိခိုးကန်တော့နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါပဲ။ ခုအချိန်ထိ ရောက်ခဲ့သမျှနေရာတွေထဲမှာ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ အကောင်းဆုံး အလှတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တောဘုန်းကြီးကလေးတို့ ဒေသမှာငယ်စဉ်တုန်းက တွေ့ရသေးပေမယ့် ခုချိန်တော့ ပျောက်ကွယ်သလောက်နီးနီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ခုတခါ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်လေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ် ပြားပြားဝပ် ဦးတော်တင်ကြတဲ့အထဲမှာ အဖွား အမေတွေပါမက လူငယ်တွေပါ ပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် ယောက်ျားလေးတွေပေါ့။ ဒီပုံရိပ်တွေ မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပင် တည်းတဲ့နေရာ မရောက်ခင်မှာပဲ”…ကျက်သရေ ရှိလိုက်တာ …” လို့ တွေးရင်း ဒီမြို့ကလေးကို ချစ်သွားမိပါတော့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အငွေ့အသက်တွေထုံမွှမ်းပြီး ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတွေ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေက […]
(9:30)Pm အခြိနျခနျ့ က ပြောကျဆုံးနပွေီး စီးသှားသညျ့ ဖိနပျနှငျ့ ပိုကျဆံ(၅၀၀)ကို သံလှငျမွဈကမျးတှငျ ခြှတျလြှကျ အနအေထားဖွငျ့ (၁၃)နှဈအရှယျမိနျးကလေး
Breaking News (၁၃)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ဦး သံလွင်မြစ်ထဲ ခုန်ချဟုယူဆရှာဖွေနေလျှက်ရှိ ….25.2.2020 (10:00)Am (၁၃)နှစ်အရွယ်လေးနဲ့ ညီမငယ်လေးရယ် ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမင်္ဂလာ(၈)လမ်းနေ မမြတ်နိုးချစ် (၁၃) နှစ် (ဘ)ဦးမောင်ဖုန်း သည် ယမန်နေ့ နေ့ခင်း(9:30)Pm အချိန်ခန့် ကတည်းက ပျောက်ဆုံးနေ၍ မိသားစုဝင်များ လိုက်လံရှာဖွေနေ‌ကောင်မလေး စီးသွားသည့် ဖိနပ်နှင့် ပိုက်ဆံ(၅၀၀)ကို မြစ်ကမ်းတွင် ချွတ်ထားလျှက် အနေအထားဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ယနေ့ နံနက်(၅)နာရီခန့်ကလဲ ဘိုကုန်းရပ် သံလွင်တံတားနားရှိ ငါးဖမ်းပိုက်များတွင် ပျောက်ဆုံးနေသည့် မမြတ်နိုးချစ် ၏ အလောင်းဟု ယူဆရသည့် အလောင်းတလောင်းငြိမိခဲ့ပြီး ပြန်ထိုးချမိသွားသည်ဟု သတင်းရပါသည်။ လက်ရှိ ကောင်မလေး၏ မိဘများနှင့် လှေသမားများမှ မော်လမြိုင် ကျောက်မီးသွေးရုံနားမှ သံလွင်တံတားထိ မြစ်ထဲ ငါးမျှားချိတ်တန်း၍ ရှာဖွေနေပါသည်။ […]
မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ (၂၅.၂.၂၀၂၀) မှ (၂.၃.၂၀၂၀ )ထိ တဈပတျစာကံကွမ်မာ ဟောစာတမျး
တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၅.၂.၂၀၂၀) ကနေ (၂.၃.၂၀၂၀ ) ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာ အနည်းငယ် ညံ့နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်မှာ မိတ်ဆွေအတိုက်ခံ ပြောဆိုတာတော့ ခံရတတ်ပါသည်။ အထူးသတိထားရမှာ သူတပါးမကောင်းကြံတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်မှု့တွေတော့ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းများဖြစ်ပါက အောက်လက်ငယ်သား မကောင်းကြံတတ်သည်။ သတိထားပါ။ အလုပ်နေရာကောင်း ရနေသော်လည်း စိတ်အနှောက်ယှက်များ နေတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက မလုပ်ပါနှင့်ညံ့တတ်ပါသည်။ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ငွေတော့မချေးပါနှင့် အလိမ်ခံရတတ်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးမှာ ၀မ်းဗိုက်ဥပါဒ်ပေးတတ်သည်။ စိုးရိမ်းစရာတော့မရှိပါ။ ပညာရေးကံမှာ စိအနှာက်အယှက်တွေ များနေရတတ်ပါသည်။ သင်၏အချစ်ရေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ချစ်သူ၏စိတ်ကောက်ခြင်းတော့ ခံရတတ်ပါသည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ ရေလမ်းခရီးကိုတော့ရှောင်ပါ။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အ၀ါရောင်ဖြစ်သည်။ […]
အိမျခွမေရှိသူမြားအား. .မွကှေကျ(၂၀) မဲဖောကျလှူးဒါနျးလိုကျတဲ့ စတေနာရှငျသူဌေး…
စေတနာကောင်းလိုက်တာ အရမ်းပဲ. .ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတိုင်း လုပ်နိုင် လှူနိုင်တဲ့အလှူ မဟုတ်ပါဘူးနော်. .တကယ့်မွန်မြတ်သောစေတနာ အလှူကြီး. . မွန်ပြည်နယ်၊လမိုင်းမြို့၊မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၌ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နေ သူဌေး ဦးခွေး၊ဒေါ်ယိမ်း တို့မှ(၃၀-၆၀)ပေရှိသည့် မြေကွက်(၂၀)ကို လမိုင်းမြို့ရှိအိုးအိမ်မရှိသည့် ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများအား .. မဲနှိုက်စနစ်ဖြင့် မဲနှိုက်ပေးခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၁)ရက် မွန်းတည့်(၁၂)နာရီက မြို့မ(၁) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ သူဌေးဦးခွေးကိုယ်တိုင် မဲဖောက်စနစ်ဖြင့် မဲဖောက်အလှူပေးခဲ့သည်။ မဲနှိုက်ရာတွင် လမိုင်းမြို့ပေါ်ရှိပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများအား အဓိကထားပြီး မဲဖောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မဲပေါက်သည့် မြေကွက်များအား စာချုပ်စာတမ်းများ ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။လမိုင်း(ပြန်/ဆက်) စေတနာရှင်သူဌေးကြီး ဦးခွေးနှင့်ဒေါ်ယိမ်းတို့ မိသားစု ယခုထက်ပို၍ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ပို၍ လှူဒါန်းနိုင်သောသူများ ဖြစ်ပါစေ။ မြို့တိုင်းနယ်တိုင်းမှာလည်း ဦးခွေးနဲ့ဒေါ်ယိမ်းတို့ကဲ့သို့သော စေတနာရှင်သူဌေးကြီးတွေ ပေါ်ထွက်ကာ အိမ်ခြံမြေလိုအပ်သူတွေကို လှူကြပေးကြ ရှိပါစေ။ (Unicode ဖွငျ့ ဖတျရနျ) […]
မနကျဆယျနာရီတိတိ ကြိုကျခမီရလေယျဘုရား အဓိဌာနျအောငျပှဲမှာအရမျးဝမျးသာပွီး အံသွနလေို့ ဘာပွောရမှနျးမသိအောငျပါဘဲ …
အရမ်းဝမ်းသာပြီး အံသြနေလို့ မနေ့ ကည အထိကို စာမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ 20.2.2020 ကျိုက်ခမီရေလယ်ဘုရားမှာ မနက်ဆယ်နာရီတိတိ အဓိဌာန်အောင်ပွဲ ဆွမ်းကပ်ရင်း နဂါးမယ်တော်ကိုလည်း နို့ပေါက်ပေါက် ဆွမ်းကပ်ရင်း အပြီးမှာ ရှင်ဥပ်ပဂုတ်ကိုလည်း သပိတ်ဆွမ်းကပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ သစ်သီး ဆွမ်းတော်ပွဲမှာပြီး သပိတ်လေးနဲ့ အမွေးတိုင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလို့ ရေထဲ မျောချပါ တယ် ။ လေကအ ရမ်းတိုက်နေတာမို့ ဖယောင်းတိုင်ကို လူနဲ့ကွယ်ပြီး မနည်းထွန်းခဲ့ရပါတယ် ။ပြီးတော့ငါးစာကျွေးတဲ့နေရာက လှေခါးထစ်တွေ အောက်ဆုံးထိဆင်းပြီး သံလွင်မြစ်ရေထဲချရတာပါ ။စိတ်က ရည်မှန်းပြီး အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ဆွမ်းကပ်ချင်လို့ ပါဘုရား.. လက်ခံပေးတော်မူပါ ။ဆွမ်း တော်ကို သုံးဆောင်ပေးတော်မူပါ ။ ဘုရား ရှိ ရာ ကို ဆွမ်း သ ပိတ် ​လေး ဆိုက် […]